Jamie Carragher Oo Dood & Muran Ku Abuuray Hadal Uu Ka Sheegay Waxa Uu Ka Aaminsan Yahay N'Golo Kante. - Gool24.Net
Jamie Carragher Oo Dood & Muran Ku Abuuray Hadal Uu Ka Sheegay Waxa Uu Ka Aaminsan Yahay N’Golo Kante.
Khabiirka Sky Sports ahna halyaygii hore ee kooxda Liverpool ee Jamie Carragher ayaa muran iyo dood ku abuuray hadal uu ka sheegay xidiga kooxda Chelsea iyo xulka qaranka France ee N’Golo Kante. Jamie Carragher ayaa soo bandhigay waxa uu xaqiiqo ahaan ka aaminsan yahay Kante.
Jamie Carragher ayaa ku dooday in Kante uu yahay ciyaartoy in badan dhex dhexaad ah oo aan heer caalami ah ahayn inkasta oo xidiga reer France muddo kooban uu ku soo guulaystay laba koob oo Premier league ah iyo waliba koobka aduunka oo aanu midkoodna Jamie Carragher ku soo guulaysan waayihiisii ciyaareed oo dhan.
Jamie Carragher oo fadhiyay Sky Sports ayaa isaga oo ka Kante waxa uu yidhi: “Kante waa ciyaartoy aad meel dhexaad ugu ah booska uu hadda ka ciayarayo ee waxa aan anigu arko. Anigu waxaan isaga u arkaa ciyaartoy khadka dhexe oo kali ah”.
Laakiin Carragher ayaa aaminsan in meesha kaliya ee uu Kante ku yahay heer caalami in ay tahay booska burburiyaha marka uu ka ciyaarayo ee aanu khadka dhexe ee uu hadda ka ciyaarayo ku ahayn heer sare.
Carragher oo Kante iyo booska burburiyaha ee dhexda danbe ka hadlaya ayaa yidhi: “Marka uu halkan ka ciyaarayo, waxaan isaga u arkaa ciyaartoy heer caalami ah. Haddaba ka tababare ahaan maxaad hadda samayn naysaa?”.
Carragher ayaa ku dooday in marnaba aanu khadka dhexe ee Chelsea ku dheeli tirmayn iyada oo Mateo Kovavic uu ku jiro wuxuuna yidhi: “Aniga ahaan, marnaba kama fifirayo in dheeli tirnaanta khadka dhexe ay ku muuqato iyada oo Kovaic uu halkaas joogo”.